Soomaalida Iswiidhan ee diinta masiixiyadda heeysta oo cabasho afka furtay | Somaliska
Ma ahan arrin sahlan in adigoo soomaali ah aad tiraahdo masiixi baan ahay iyadoo soomaalida badankeeda lugu og yahay ineey yihiin ummad islaam ah. Saas oo ay tahayna waxaa jira soomaali waligoodba lugu sheegi jiray ineey yihiin masiixiyiin oo qaarkood macruuf ku ahaa dhinaacs.
Shaqsiyaadka lugu magacabao Muna Walter, Shiine iyo Shania Gaabow oo ah soomali heeysata diinta masiixiga ayaa wargeyska u sheegay in ay soo gaaraan farrimo fariimo dil ah. Halka qaarkood fariimahan hanjabaada ah loo mar siiyey baraha bulshadda. Muna Walter oo ka mid ah shaqsiyaadka diinta ka baxay ayaa caan ku ah aflagaadeeynta iyo ka been sheegista diinta Islaamka iyadoo baraha bulshaddana ay si weyn u adeegsato.